Iingcebiso zokubhala inoveli ngaphandle kokubhubha ndizama | Uncwadi lwangoku
Uninzi lwethu lukhe lwaqikelela malunga nombono bhala inoveli, Ngale ndlela sinika ubume kwelo bali elenzeka ngesiquphe kuthi okanye ebelilengele entloko yethu iminyaka.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ngenxa yobuvila, ngamanye amaxesha ngenxa yokunqongophala kwexesha, kwaye kwiimeko ezininzi ngenxa ndingazi ukuba ndiqale ngaphi sibeka lo mbono ecaleni kwaye siphele silibale ngawo.
Inyani yile yokuba ukubhala inoveli ngumsebenzi oquka umzamo obalaseleyo, unyamezelo oluninzi kwaye ngaphezulu kwako konke uthotho lolwazi lobuchwephesha olungenakho ukungahoywa ukuba sifuna ukuphumelela kwinkampani yethu enzima kodwa enomdla. zikhona eziliqela imiba esingamele siyityeshele ukuba sizimisele ukuyithatha nzulu ingxelo yethu yendalo.
Kulo lonke eli nqaku siza kuzichaza ngokufutshane kwaye ngokulandelayo siza kuma kuye ngamnye kubo, sichaze kwaye senze amanqaku anomdla, kunye nokuhambisa iingcebiso ezahlukeneyo malunga. Ewe, injongo yesi sithuba asikokubonelela ngeendaba ezimnandi malunga noku (kuba ubuchule bokubhala inoveli budala kakhulu kwaye amawaka namawaka ezincoko abhaliwe malunga nendlela yokujongana nenkqubo yokuyila kwingxelo) kodwa kunoko izenza ngathi Yiba yinto kunye nohlobo lokudityaniswa kwamanqaku aphambili akhoyo kuninzi lweencwadi. Yiyo loo nto kolu qhakamshelwano lokuqala siza kuzikhawulela ekuboneni amanqaku ali-10 esikholelwa ukuba abalulekile ekubhaleni inoveli, kwaye kwezi zilandelelanayo siza kuphengulula nganye nganye ngokweenkcukacha, songeza kwa eli nqaku linye amakhonkco afanelekileyo njengoko zinjalo Masipapashe ukuze ukwazi ukufikelela kuzo ngonqakrazo olulula.
1 Ukwenza iskripthi okanye ubundundundu
2 Ukudalwa kwabalinganiswa
8 Amabali afakiwe
9 Uphengululo kunye nenkqubo yokulungisa
10 Isimo sengqondo
Ukwenza iskripthi okanye ubundundundu
Nangona elowo elandela indlela yakhe yokuphuhlisa inoveli yakhe, enye yezona ngcebiso ziphindaphindwayo kwizifundo ezahlukeneyo zokubalisa kunye neencwadana zezi ukwenza ulwandlalo okanye iskripthi esivumela ukuba sazi ukuba siyaphi na imbali yethu. Oku kudla ngokwandulelwa yingqondo apho, njengedrafti, izimvo ezahlukeneyo kunye nemiboniso eya kuthi ibe ngumqolo webali iguqulwe. Nje ukuba zifunyenwe, zilungelelaniswe kwindunduma, ethi, ngendlela ethe kratya, okanye ichaze indawo nganye okanye isahluko ngasinye somsebenzi, iluhlobo lwamathambo okanye isikhokelo esifanayo esiya kuthi sivumele ukuqhubela phambili ngenqanaba elikhuselekileyo .
Elinye inqaku esingafanele ukulihoya kukwenziwa kwabalinganiswa abanokuthenjwa, kunye nabalinganiswa abaziwayo kunye neemeko zabo kunye nokuphikisana, bahlala bekuthintela ukwenza oonodoli ngaphandle kobuntu babo. Kungenxa yoko kufuneka sisebenze kakuhle kwizengqondo zomntu ngamnye kubo ibalulekile, ngokobuninzi beencwadana zokudala ezilandelwayo, ukwandiswa kwamaphepha abalinganiswa abasivumela ukuba sizazi nzulu kwaye sizigcine ngaphakathi iinjongo zabo kunye neentshukumisa zabo ngaphambi kokuba bazenze okanye bathethe. Kwinqaku elihambelanayo siza kunika izitshixo zokufezekisa ubungqina obukhankanywe ngasentla babalinganiswa bethu kunye nesindululo samakhadi esiya kuwasebenzisa ukuqokelela lonke ulwazi malunga nabo ngaphambi kokuqala ukubhala.
Nangona ayinguye wonke umntu ocacileyo ngayo, umbalisi uyinto eyintsomi eyahluke kwaphela kumbhali womsebenzi. Lilizwi elibalulekileyo kwinoveli, elingenakubakho ngaphandle kobukho bayo. Kubalulekile ukuba wazi iindidi zomlandisi ezikhoyo kunye neempawu zomntu ngamnye kubo ukuze ukhethe elifanela ibali esifuna ukulibalisa ukuphucula umgangatho walo. Kuya kufuneka silihloniphe ukhetho esilwenzayo, sihlale sinyanisekile kulo kwaye ngaphandle kokuba umbalisi ephikisana nobuntu bakhe. Ngelo xesha siza kuyeka malunga nolunye uhlobo lweentetho ezikhoyo kunye neempawu zazo.
Unyango lwexesha yenye yezinto eziyimfuneko ekwakheni inoveli ngesisombululo esithile. Ngenxa yoko kufuneka umahluko kwimiba eyahlukeneyo enxulumene nexesha Njengalo ixesha elibekwa ngalo ibali, ubude beziganeko kunye nesingqisho sexeshana senoveli kunye nokwandiswa kwayo, ukuphuma, ushwankathelo kunye ne-ellipsis. Ukubaluleka kubonakala kuyinto elula, kodwa njengoko siza kubona kungekudala, ngumsebenzi ofuna umgudu omkhulu kunye nengqwalaselo. Siza kungena kwimiba yexeshana kwamanye amanqaku alandelayo.
Akukho nto ibaluleke ngaphezu kwexesha yindawo apho isenzo senzeka khona. Okwangoku kubaluleke kakhulu ukubhala ukuba siceba ukuseta inoveli yethu kwindawo yokwenyani, ngokunjalo yenza ngobuchule iinkcazo ezifanelekileyo evumela umfundi ukuba afumane umbono olungileyo ngendawo esiyikhethileyo. Ukwandiswa kwamakhadi esithuba ngumbono olungileyo wokungaguquguquki kuwo wonke umsebenzi kunye nesithuba esenzelwe wona.
Ngaphandle kokuvela kwindawo yesithandathu, yenye yezinto zokuqala ekufuneka sizenzile, mhlawumbi emva (okanye ngexesha) lokucaciswa kwerundown, ukuze singayeki inkqubo yokubhala inoveli ixesha elide kunokuba kufanelekile. singene kulo msebenzi. Nangona kunjalo, yinto engaphelelanga kwisigaba ngaphambi kokubhalwa ukusukela njengoko siqhubeka kwindalo yethu, izinto ezintsha ziya kuvela apho kuyakufuneka sizibhale phantsi ukuze sikwazi ukunika ingxelo elandelanayo. Ukuba yinoveli eyimbali, oku kuziswa njengenye yeendlela eziphambili zokufumana iziphumo ezimangalisayo.
Uninzi lweencwadana ezinemigaqo zicacile kwisitayile: zama ukuba njalo icacile, iyavakala indalo kwaye uphephe ulwimi olufakelweyo: ungathethi ngamagama amabini into onokuyithetha ngegama elinye. Ngexesha elifanelekileyo, kumanqaku alandelayo, siza kubona ukubaluleka kokwahlula ngokucacileyo isitayile sombalisi kwisitayile esisetyenzisiweyo kwincoko yababini, ekufuneka ixhomekeke kwindlela abalinganiswa abathetha ngayo. Siza kuzama ukubonisa ezinye iimpazamo eziqhelekileyo ekufuneka siziphephe.
Ubukho bamabali afakiweyo aqhelekileyo kwingxelo, oko kukuthi, ye iimbali yesibini equlathe ibali eliphambili, kwaye kusoloko kuthethwa ngomnye wabalinganiswa. Yinkqubo enika ubutyebi obukhulu kunye nokuntsokotha kwenoveli kwaye ngamanye amaxesha kuye kwalungiselelwa ukuyilwa yonke imisebenzi enje nge "Thousand and One Nights." Kuyimfuneko ukuba ubazi kakuhle obu buchule ukuze ube nakho ukuwenza ngokwanelisayo.
Uphengululo kunye nenkqubo yokulungisa
Kubalulekile ukugxeka kwinto esiyibhalayo, kokubini wakugqiba umsebenzi, ukuze Lungisa iimpazamo ezinokubakho okanye uphucule ezo ndawo singekho kuzo ngokupheleleyo wanelisekile, njengaxa kubhalwa okufanayo, ukunqanda ukutshintsha iziqwenga ezininzi emva kokugqiba. Ngamanye amaxesha sinokuthembela kuncedo lwangaphandle (nokuba lolobungcali okanye uluvo olulula kodwa oluxabisekileyo lwabafundi bendawo esihlala kuyo esithembela kuyo) kodwa igama lokugqibela lezinto ekufuneka zitshintshiwe zezethu kuphela. Inokuba sesinye sezona zigaba zidinayo kwaye ziphindaphindwayo zenkqubo, ngenxa yokunqongophala kokuyila kunye nomsindo ovela ekucimeni oko kusixabise ukuba sikubhale ngelo xesha, kodwa kuyaxhomekeka ekubeni sisiphumo Inoveli iyanelisa.
Ukuze ube ngumbhali ... kufuneka ubenayo Isimo sombhali. Ngamafutshane, oku kuthetha ukuba kucace gca malunga nokuba kutheni sifuna (okanye sifuna) ukubhala, kodwa ngaphezulu kwako konke ... yehla uye emsebenzini kwaye uyenze. Ihlabathi ligcwele ababhali abangazange basonta ngaphezulu kwemihlathi emibini, kodwa abo kwiintloko zabo banokuba ngabadali bezona zinto zithengisa kakhulu abalinde iimeko eziyimfuneko ukusonwabisa sonke ngomsebenzi wabo. Ngokuqinisekileyo abayazi okwangoku urhwebo. Ukuqala ukubhala kuyimfuneko njengokudala indlela yesiqhelo kunye nokubhala, ukuhlala uzingisile, funda kangangoko ukuqhubeka nokufunda kwaye ngaphezu kwako konke, eyona nto ibaluleke kakhulu: yonwabele into esiyenzayo, kuba kungenjalo akukho nto iya kuba nengqondo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uyibhala njani inoveli
Amanqaku alishumi, ndiyacinga, asengqiqweni kakhulu. Zigcwele izizathu kunye nezimvo ezifanelekileyo malunga nomsebenzi wokubhala. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba, njengakuyo yonke into, wonke umntu uneendlela zakhe zokusebenzisa kunye namasiko, kodwa abanye bayayiphepha imithetho kunye neendlela, vumela ubuchopho babo buyalele kwizandla ezixakekileyo eziqhubela phambili kancinci emsebenzini wazo wokubhala iziqwengana zebali elingacacanga.
Umyalelo uhlala ubonakala ucebiseka kodwa, njengokuba ababhali abaninzi besebenzisa indlela echaziweyo ngokusetyenziswa kunye nokuqiniseka, kukwakho abo bathabathayo ngumnqweno wokubhala njengoko uvela kwimemori yabo, kumaphupha abo okanye amaphupha amabi, aya kuthi ekugqibeleni abe yimbali angazazi i-priori ikhosi okanye isiphelo. Olu hlobo lombhali luya kuba, ngowokuqala ukumangaliswa libali elibaliweyo xa ebhala igama elithi END.